अचम्मको जागिर : एक कम्पनीले सबैभन्दा धेरै सुत्ने मानिसलाई डेढ लाख तलब दिने ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/अचम्मको जागिर : एक कम्पनीले सबैभन्दा धेरै सुत्ने मानिसलाई डेढ लाख तलब दिने !
सबैलाई थाहा छ , विश्वकै जुनसुकै देशमा पनि काम गरेमात्र तलब पाइन्छ । जुन क्षमता र स्तर अनुहार गर्ने कामहरु चाहि फरक फरक हुन्छ । तर विश्वकै जुनसुकै कुनामा पनि सुते वा अल्छी गरेमा भोकै हिड्नुपर्छ ,त्यसको तलब पाइदैन् । त्यसैले सुतेर बसेमा पैसा कमाउन र परिवार पाल्न सकिदैन् ।
यो अफरको लागी कम्पनीले केही जना मात्र मानिसको छनोट गर्नेछ । छनोटमा परेको मानिसलाई कम्पनीले सुत्ने गद्दा दिनेछ । त्यसपछि कम्पनी भित्रै वा घरमा गद्दा लगेर शर्तअनुसार सुत्नु पर्नेछ । अनि दैनिक सुत्ने मानिसले गद्दामा सुत्दा निन्द्रा राम्रो आयो आएन कम्पनीमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ ।
कम्पनीको नियम अनुसार छनोट भएका मानिसहरुले १ सय दिनसम्म दैनिक ९ घण्टा अनिवार्य रुपमा सुत्नुपर्नेछ । यदि घरमा गद्दा लगेर सुत्दा नसुतिकनै सुतेको भनेर झुठो बोल्न पाइनेछैन् । किनभने गद्दामा कम्पनीले स्मार्ट चिपको प्रयोग गरेको छ । यसले सुते नसुतेको जानकारी दिनेछ । मिडिया एनपी